Waa maxay Raadintaada Aasaasiga ah? | Martech Zone
Arbacada, Juun 24, 2009 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Caawa waxaan biir la qaatay saaxiib fiican iyo jaal Kristian Andersen. Shirkada Kristian waxay u tahay ilaha maxaliga ah ee cajiibka ah shirkado badan heer gobol iyo heer qaranba Kristian waa lataliye shaqsiyeed.
Wadahadal kasta oo aan la yeesho Kristian ayaa i tamariya - oo waxaan isku xujeynaa fahamka midba midka kale ka qabo sida ganacsigu u shaqeeyo, sida Software-ka Adeeggu u shaqeeyo, sida ay u shaqeyso warbaahinta bulshada… waad fahmi kartaa ujeeddada!
Kristian iyo waxaan ka wada hadalnay blogging caawa shirkadiisuna waxay ku qanacsan tahay barnaamijka iyo istaraatiijiyada ay adeegsanayaan. Maaha inaan u maleynayo inay shaqo fiican qabanayaan - kooxda Kristian waxay qortay waxyaabo aad u xiiso badan. Waxa aan kula tartamay Kristian ayaa ah in balooggu uu kulmayo iyo in kale kara raadinta dabiici ah.
Taasi waxay u ekaan kartaa hoopla, laakiin maahan. Hadaad blog gareeyso hada, sidee ku ogaan kartaa inay shaqeyso? Istaraatiijiyadda KA, waxaa loo maleynayaa inay yihiin hoggaamiyeyaasha istiraatiijiyadda calaamadeynta, naqshadeynta iyo suuqgeynta suuqgeynta. Sidee do taas waad cabirtaa Runtii waa wax fudud.
Kristian Andersen + Associates waa nooc nooc edbin iyo la-talin qaabeyn khibradeed leh. Waxaan ka caawinnaa shirkadaha inay qeexaan, caddeeyaan oo ay fuliyaan istiraatiijiyad caan ah iyo khibradaha isticmaale ee keena guusha muddada dheer.
isticmaalka Xeebaha, Waxaan aqoonsaday qoraalada kujira KA's blog ee wada taraafikada, oo ay weheliyaan ereyada muhiimka ah ee baloogga loo raadinayo, darajada boggaga natiijooyinka, taraafikada raadinta dabiiciga ah ee qaraabada ah, iyo mugga billaha ah ee ereyada muhiimka ah / weedho kasta. muddo:
kiristaan (Darajada 6, Taraafikada 81.53%, Qiyaasta Raadinta: 170)
Christian andersen (Darajada 1, Taraafikada 13.51%, Qiyaasta Raadinta: 91)
Christian andersen (Darajada 2, Taraafikada 3.69%, Qiyaasta Raadinta: 12)
yoolalka muddada dhow iyo muddada fog (Darajada 11, Taraafikada 0.63%, Qiyaasta Raadinta: 22)
ka a (Darajada 5, Taraafikada 0.18%, Qiyaasta Raadinta: 0)
yoolalka muddada-dheer iyo muddada-gaaban (Darajada 8, Taraafikada 0.18%, Qiyaasta Raadinta: 140)
mobilada googlereader (Darajada 4, Taraafikada 0.09%, Qiyaasta Raadinta: 260)
reer magaal (Darajada 14, Taraafikada 0.09%, Qiyaasta Raadinta: 16)
kala duwan iyo noocyo kala duwan (Darajada 19, Taraafikada 0.09%, Qiyaasta Raadinta: 16)
Indianapolis ibj (Darajada 18, Taraafikada 0%, Qiyaasta Raadinta: 390)
cusub cusub (Darajada 1, Taraafikada 0%, Qiyaasta Raadinta: 46)
Marka kumanaan hogaamiyeyaal ganacsi ah oo ka baaraandegaya internetka talo iyo hogaamin ku saabsan la tashiga astaamaha, sidee baa barta blog-ka ee Kristian ugu sii xoogeysaneysaa meeshan? Dadaalka kooxda Kristian ay u gelinayaan baloog garaynta ayaa laga yaabaa inay ku bixiyaan abaalmarinta aqoonsi lala yeesho tartamayaasha iyo macaamiisha, laakiin anigu ma aaminsani inay faa'iido u tahay helitaanka kalsoonida iyo awoodda leh aragtida ganacsiyada ku sameynaya baaritaanka websaydhka midkan labaad!
Erayada mugga leh ee ah in blog KA-ga ay kuxirantahay shabagyada qiyaastii 1,100 raadin bishiiba, laakiin taasi maahan arrinta. Arrinta ayaa ah in shuruudahaasi aysan khusaynin waxa KA siinayo dhagaystayaashooda. Raadinno la mid ah Naqshadaynta sumadda, xeeladaha brand, Iyo la-talinta sumadda net ka badan 10k baaritaan bishii.
Su'aashu ma ahan inaad leedahay ama ma haysatid baloog weyn, su'aashu waxay tahay in balooggaagu uu gaarayo awooddiisa dabiici ah oo buuxda. Ku sameynta xoogaa falanqeyn keyword ah oo ku saabsan shuruudaha ay bartilmaameedkaaga dhagaystayaashu raadinayaan waxay ku siin doontaa tiro koob ku saabsan inta jeer ee ereyadaas la baaray. Waxay sidoo kale siin doontaa balooggaaga tilmaamo ku saabsan shuruudaha looga faa'iideysto qoraalkaaga.
Fiiro gaar ah: Kristian wuxuu i siiyay okay inaan daabaco qoraalkan - taasi waa sida weyn ee ninku u yahay! Waxaan u maleynayaa inay jiraan waxyaabo badan oo suurtagal ah oo ku jira boggiisa waxaana rajeynayaa inuu bilaabo inuu ka fekero suurtagalnimada gaaritaanka dadka halkaas jooga ee raadinaya jihada shirkadiisa iyo hoggaamintiisa!
Tags: la-talinta sumaddaxeeladaha brandbrandingekspertencilmi-baarista muhiimka ahChristian andersenorganiccilmi baarista dabiiciga ahka iman kara
Fulinta Amazon S3 ee Blogs WordPress
Jun 24, 2009 saacadu markay ahayd 1:20 AM
Haye, waa maxay sheygaas Amazon S3?
Waxaan hiigsanayaa inaan ka dhigo waxyaabaha aan ka kooban yahay kuwo kalifaya oo la xiriira, muddada dheer. Xaqiiqda dhabta ah ee dadka qaarkiis ku qaataan saacadahooda soo jeedka 'priming' qoraalkooda makiinadaha ayaa walwal igu haya.
Blogs waa muujinta shaqsiyadeed iyo ganacsi, wax intaa ka badan ma jiraan.
Runtii waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka ogaado waxaas Amazon in kastoo…
Jun 24, 2009 saacadu markay ahayd 9:12 AM
Waa salaaman tahay Sahail,
Faahfaahin qaar ka mid ah Amazon S3. Waxaan ka riixayaa dhammaan faylalka warbaahinta ee Amazon hadda waana si muuqata u hagaajisay waxqabadka degelkeyga.
Jun 24, 2009 saacadu markay ahayd 8:32 AM
"Ku sameynta xoogaa falanqeyn keyword ah oo ku saabsan ereyada ay bartilmaameedsadayaashaadu raadinayaan"
Maxaad u isticmaashaa tan?
Jun 24, 2009 saacadu markay ahayd 9:10 AM
Waxaan ku sheegayaa aalad weyn oo kor ku xusan, SEMRush. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad aragto sida tusmada boggaaga, iyo sidoo kale fiiriso ereyada muhiimka ah, natiijooyinka dabiiciga ah iyo mugga raadinta. Xitaa waad dib u eegi kartaa boggaga tartameyaasha si aad u aragto ereyada muhiimka ah ee ay ka helayaan taraafikada. Habka bilaashka ah waa in la isticmaalo Qalabka muhiimka ah ee raadinta ku saleysan Google laakiin ma ahan mid xoogan.
Jun 25, 2009 saacadu markay ahayd 7:22 AM
Waad ku mahadsantahay jawaab celintaada Doug.
Oktoobar 23, 2009 at 2:14 AM
Xuquuqda lacagta, Doug. Tani ma aha wax adag in la fahmo oo KA waxay u egtahay shaqsi dhalaalaya. Waan hubaa inay durbaba bilaabeen inay ka faa'iideystaan ​​talooyinkaaga fikirka leh.